လက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှုးများ အပိုင်း(၁)
10 Oct 2018 . 9:57 PM
ဘောလုံးပွဲတွေမှာ အရေးကြီးဆုံးအရာကဘာလဲဆိုရင် သွင်းဂိုးတွေလို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။ ပရိသတ်တွေဟာလည်း ဂိုးများများသွင်းတဲ့ ပွဲတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့ တိုက်စစ်မှုးဆိုရင် ဘဘောကျကြတာကလည်း ထုံးစံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့ တိုက်စစ်မှုးဖြစ်ဖို့ဆိုတာက သိပ်ပြီးလွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းမွန်တဲ့ ခြေစွမ်း ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပြင် ပါရမီကောင်းဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ပရိသတ်တွေအတွက် လက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှုးများ အပိုင်း(၁)ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၅) အူဘာမီယန်း Aubameyang
အာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှုး အူဘာမီယန်း Aubameyang ဟာ လက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုးတွေထဲကတစ်ဦးပါ။ အူဘာမီယန်းဟာ နေရာလွတ်ပေးလို့မရတဲ့ တိုက်စစ်မှုးဖြစ်ပြီင်္း တောင်ပံတိုက်စစ်မှာသာမက အထောင်တိုက်စစ်မှုးအဖြစ်ပါကစားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းကိုစရောက်စမှာပဲ အစွမ်းပြနိုင်တဲ့ အူဘာမီယန်းဟာ လက်ရှိမှာတော့ အသင်းမှာအကောင်းဆုံးအထိုင်ကျနေပြီး အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်း ပြသနေခဲ့ပါပြီ။ အူဘာမီယန်းရဲ့ တစ်ပွဲပျှမ်းမျှသွင်းဂိုးနှုန်းဟာ ( ၀.၆၆ )ဂိုးရှိပါတယ်။
(၄) အီမိုဘီလီ Immobile
စီးရီးအေရဲ့ ထွန်းတောက်ကြယ် လာဇီယိုတိုက်စစ်မှုး အီမိုဘီလီ Immobile ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ တိုက်စစ်မှုးဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ တိုရီနိုအသင်းနဲ့အတူ တောက်ပလာခဲ့တဲ့ အီမိုဘီလီဟာ ဒေါ့မွန်အသင်းမှာ ကျရှုံးခဲ့ပေမယ့် အဲဒီကျရှုံးမှုကို လာဇီယိုအသင်းမှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ ပြန်လည်ချေဖျက်ပြနေသူပါ။ အီမိုဘီလီဟာ ပိုကောင်းတဲ့ အသင်းမှာကစားရင်ပိုကောင်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်မယ့် တိုက်စစ်မှုးမျိုးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ တစ်ပွဲပျှမ်းမျှသွင်းဂိုးနှုန်းကတော့ (၀.၇၁)ဂိုးရှိပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဟာ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ တိုက်စစ်မှုးလည်းဆိုတာကို မန်ယူနဲ့ ရီးယဲလ်တို့မှာ အကြိမ်ကြိမ်သက်သေပြပြီးပါပြီ။ လက်ရှိ ဂျူဗင်တပ်စ်မှာလည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေနဲ့ အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကို ဦးဆောင်ကစားနေပြီး ရာသီအစကသာ အထိုင်ကျဖို့ အနည်းငယ်ရုန်းကန်ခဲ့ရတာပါ။ ဒီလိုအနေအထားကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒို ရဲ့တစ်ပွဲပျှမ်းမျှသွင်းဂိုးနှုန်းဟာ အနည်းငယ် ကျဆင်းသွားခဲ့ရပြီး လက်ရှိ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ တစ်ပွဲပျှမ်းမျှသွင်းဂိုးနှုန်းကတော့ ( ၀.၇၂)ဂိုးရှိပါတယ်။
(၂) ဘာပေ Mbappe
ဘာပေ Mbappe ဟာ ပြင်သစ်လိဂ်မှာကစားလို့ အခုလိုခြေစွမ်းပြနေတာလို့ တွေးမိရင်တော့ မှားယွင်းတဲ့ အတွေးလို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်။ ဘာပေဟာ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ ကစားသမားလည်းဆိုတာ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ လက်ရှိမှာလည်း ဘာပေရဲ့ အသက်ဟာငယ်ရွယ်သေးတာကြောင့် အနာဂတ်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo နဲ့ မက်ဆီ Messi တို့ရဲ့နေရာကိုယူမယ့်သူလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာပေရဲ့ တစ်ပွဲပျှမ်းမျှသွင်းဂိုးနှုန်းဟာ( ၀.၇၃)ဂိုးရှိပါတယ်။
(၁) ဟယ်ရီကိန်း Harry Kane
ဟယ်ရီကိန်း Harry Kane ဟာ သူ့အလုပ်ပဲသူလုပ်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် သစ္စာစောင့်သိပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တဲ့ ကစားသမားလို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းဟာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိပြီး ခေါ်ယူချင်တဲ့ အသင်းကြီးတွေရှိနေသလို ရရှိနေတဲ့ လစာငွေဟာလည်း ရသင့်တဲ့ နှုန်းထက်နည်းနေပေမယ့် ဘာအသံမှမထွက်ဘဲ စပါးအသင်းအတွက်ပဲ အရာရာအားလုံးပေးဆပ်နေသူပါ။ အင်္ဂလန်ရဲ့ ရွန်နီ Rooney နောက်ပိုင်း အကောင်းဆုံးတိုက်စစ် ထုတ်ကုန် ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ တစ်ပွဲပျှမ်းမျှသွင်းဂိုးနှုန်းဟာ ( ၀.၇၆)ဂိုးရှိပါတယ်။
Photo: Metro , San Francisco Chronicle , SPORTbible
လကျရှိဘောလုံးလောကရဲ့ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှုးမြား အပိုငျး(၁)
ဘောလုံးပှဲတှမှော အရေးကွီးဆုံးအရာကဘာလဲဆိုရငျ သှငျးဂိုးတှလေို့ပဲ ဖွရေမှာပါ။ ပရိသတျတှဟောလညျး ဂိုးမြားမြားသှငျးတဲ့ ပှဲတှကေို ကွိုကျနှဈသကျကွပွီး ဂိုးသှငျးကောငျးတဲ့ တိုကျစဈမှုးဆိုရငျ ဘဘောကကြွတာကလညျး ထုံးစံပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ထိပျတနျးအဆငျ့ရှိတဲ့ ဂိုးသှငျးကောငျးတဲ့ တိုကျစဈမှုးဖွဈဖို့ဆိုတာက သိပျပွီးလှယျကူတဲ့အရာတော့မဟုတျပါဘူး။ ကောငျးမှနျတဲ့ ခွစှေမျး ၊ ကွိုးစားအားထုတျမှုအပွငျ ပါရမီကောငျးဖို့လညျး လိုပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပရိသတျတှအေတှကျ လကျရှိဘောလုံးလောကရဲ့ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှုးမြား အပိုငျး(၁)ကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၅) အူဘာမီယနျး Aubameyang
အာဆငျနယျတိုကျစဈမှုး အူဘာမီယနျး Aubameyang ဟာ လကျရှိဘောလုံးလောကရဲ့ အကောငျးဆုံးတိုကျစဈမှုးတှထေဲကတဈဦးပါ။ အူဘာမီယနျးဟာ နရောလှတျပေးလို့မရတဲ့ တိုကျစဈမှုးဖွဈပွီင်္း တောငျပံတိုကျစဈမှာသာမက အထောငျတိုကျစဈမှုးအဖွဈပါကစားနိုငျသူဖွဈပါတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးကိုစရောကျစမှာပဲ အစှမျးပွနိုငျတဲ့ အူဘာမီယနျးဟာ လကျရှိမှာတော့ အသငျးမှာအကောငျးဆုံးအထိုငျကနြပွေီး အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျရညျတှကေိုလညျး ပွသနခေဲ့ပါပွီ။ အူဘာမီယနျးရဲ့ တဈပှဲပြှမျးမြှသှငျးဂိုးနှုနျးဟာ ( ဝ.၆၆ )ဂိုးရှိပါတယျ။
စီးရီးအရေဲ့ ထှနျးတောကျကွယျ လာဇီယိုတိုကျစဈမှုး အီမိုဘီလီ Immobile ဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ တိုကျစဈမှုးဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ တိုရီနိုအသငျးနဲ့အတူ တောကျပလာခဲ့တဲ့ အီမိုဘီလီဟာ ဒေါ့မှနျအသငျးမှာ ကရြှုံးခဲ့ပမေယျ့ အဲဒီကရြှုံးမှုကို လာဇီယိုအသငျးမှာ အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျရညျတှနေဲ့ ပွနျလညျခဖြေကျြပွနသေူပါ။ အီမိုဘီလီဟာ ပိုကောငျးတဲ့ အသငျးမှာကစားရငျပိုကောငျးတဲ့ စှမျးဆောငျရညျကိုပွသနိုငျမယျ့ တိုကျစဈမှုးမြိုးဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ တဈပှဲပြှမျးမြှသှငျးဂိုးနှုနျးကတော့ (ဝ.၇၁)ဂိုးရှိပါတယျ။
စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဟာ ဘယျလောကျကောငျးတဲ့ တိုကျစဈမှုးလညျးဆိုတာကို မနျယူနဲ့ ရီးယဲလျတို့မှာ အကွိမျကွိမျသကျသပွေပွီးပါပွီ။ လကျရှိ ဂြူဗငျတပျဈမှာလညျး စီရျောနယျလျဒိုဟာ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးတှနေဲ့ အသငျးရဲ့တိုကျစဈကို ဦးဆောငျကစားနပွေီး ရာသီအစကသာ အထိုငျကဖြို့ အနညျးငယျရုနျးကနျခဲ့ရတာပါ။ ဒီလိုအနအေထားကွောငျ့ စီရျောနယျလျဒို ရဲ့တဈပှဲပြှမျးမြှသှငျးဂိုးနှုနျးဟာ အနညျးငယျ ကဆြငျးသှားခဲ့ရပွီး လကျရှိ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ တဈပှဲပြှမျးမြှသှငျးဂိုးနှုနျးကတော့ ( ဝ.၇၂)ဂိုးရှိပါတယျ။
(၂) ဘာပေ Mbappe
ဘာပေ Mbappe ဟာ ပွငျသဈလိဂျမှာကစားလို့ အခုလိုခွစှေမျးပွနတောလို့ တှေးမိရငျတော့ မှားယှငျးတဲ့ အတှေးလို့ပဲပွောရပါလိမျ့မယျ။ ဘာပဟော ဘယျလောကျကောငျးတဲ့ ကစားသမားလညျးဆိုတာ ခနျြပီယံလိဂျပှဲတှနေဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ မွငျတှခေဲ့ရပွီးပါပွီ။ လကျရှိမှာလညျး ဘာပရေဲ့ အသကျဟာငယျရှယျသေးတာကွောငျ့ အနာဂတျမှာ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo နဲ့ မကျဆီ Messi တို့ရဲ့နရောကိုယူမယျ့သူလညျးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဘာပရေဲ့ တဈပှဲပြှမျးမြှသှငျးဂိုးနှုနျးဟာ( ဝ.၇၃)ဂိုးရှိပါတယျ။
(၁) ဟယျရီကိနျး Harry Kane
ဟယျရီကိနျး Harry Kane ဟာ သူ့အလုပျပဲသူလုပျတဲ့သူ ဒါမှမဟုတျ သစ်စာစောငျ့သိပွီး ပရျောဖကျရှငျနယျဆနျတဲ့ ကစားသမားလို့ပဲဆိုခငျြပါတယျ။ သူ့ရဲ့ခွစှေမျးဟာ ထိပျတနျးအဆငျ့ရှိပွီး ချေါယူခငျြတဲ့ အသငျးကွီးတှရှေိနသေလို ရရှိနတေဲ့ လစာငှဟောလညျး ရသငျ့တဲ့ နှုနျးထကျနညျးနပေမေယျ့ ဘာအသံမှမထှကျဘဲ စပါးအသငျးအတှကျပဲ အရာရာအားလုံးပေးဆပျနသေူပါ။ အင်ျဂလနျရဲ့ ရှနျနီ Rooney နောကျပိုငျး အကောငျးဆုံးတိုကျစဈ ထုတျကုနျ ဟယျရီကိနျးရဲ့ တဈပှဲပြှမျးမြှသှငျးဂိုးနှုနျးဟာ ( ဝ.၇၆)ဂိုးရှိပါတယျ။
by Naing Linn . 13 mins ago